पत्रकारलाई लागुऔषध राखेर फसाउने दुई प्रहरी निलम्बित, यस्तो छ भित्रि रहस्य — Imandarmedia.com
१खुला ठाउमै सम्भोग गरिरहेको देखेपछि घुम्न आएकाहरुले गरे रामधुलाई, को हुन् उनि ?
२चीनद्वारा अन्तरिक्षमा हाइपरसोनिक क्षेप्यास्त्र परीक्षण, अमेरिकी खुफिया एजेन्सी हैरान
३माधव नेपालले दिए आफ्नो सम्धीलाई यति ठूलो जिम्मेवारी, पार्टीमा खैलाबैला
४कुलामानको अर्को चमत्कार, भारत र चीनमा समेत तरङ्ग
५देउवाले बोलाए सर्वदलीय बैठक, एजेण्डा सुनेपछि प्रचण्ड बेहोस
६डिस होमले २३ करोड रुपैयाँ बराबरको आइपीओ निष्कासन गर्दै, आबेदन मिति तोकियो
७भारतीय सिमा नजिकै भिडन्त, भारतीय सेनाका ९ सहित् २२ को मृत्यु
८ताइवानका लागि अमेरिका र चीनबिच युद्ध, चिनियाँ वायु सेना ताइवानको आकासमा
९रामकुमारी झाँक्री फेरी भाइरल, श्रीमान् बने कारण
१०नर्भिक हस्पिटलबाट आयो मोहन वैद्यबारे दुखत: खबर, कार्यकर्ता निराश
११आशा गरिएका अर्थमन्त्री जनार्दनले नै दिउसै रात पारेपछि…
१२मोहम्मद हकीम मृत्यु प्रकरण- गृहमन्त्री खाणले यस्तो कदम चालेपछि जिप्रका सुनसरी थुरुरु, अब के हुन्छ ?
४बालकोटबाट आयो ओलीबारे दुःखद खवर, एमाले नेता कार्यकर्ता निरास
५चिनियाँ नेतालाई मृत्युदण्ड, प्रधानमन्त्री ओलीले दिएका थिए रात्रीभोज
६गृह मन्त्रालय भित्रको अर्को ठुलो काण्ड बाहिरियो, पति-पत्नी दुवै तनावमा
७को हुन् कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्की, के हो राष्ट्रपतिसँगको नाता ?
९बास बस्न सुटुक्क चन्द्रागिरिको रिसोर्टमा किन पुगिन् राष्ट्रपति भण्डारी, खुल्यो यस्तो रहस्य
१०कांग्रेसकी चर्चित सांसदले जन्माइन बिबाह नै नगरी बच्चा
११चिनियाँ सेनाले हतियारसहित भारतीय सेनाको गस्ती टोली नियन्त्रणमा लियो
१२प्रचण्ड पुत्री रेणुलाई झट्का, अख्तियारले हान्यो छापा
पत्रकारलाई लागुऔषध राखेर फसाउने दुई प्रहरी निलम्बित, यस्तो छ भित्रि रहस्य
काठमाडौँ। रौतहटमा सादा पोसाकमा खटिने प्रहरी (घुमुवा)ले लागुऔषध राखेर पत्रकारलाई फसाएको पुष्टि भएको छ । लागुऔषध ‘प्लटिङ’ गरेको आरोपमा प्रहरीले धीरज यादव र जितेशकुमार यादवलाई पक्राउ गरेको छ ।
रौतहटबाट सञ्चालित ‘रौतहट एक्सप्रेस’का पत्रकार महम्मद मोजिबुल्लाह र शेख गुलाबलाई १०५ ट्याब्लेट लागुऔषध नाइट्राभेट सहित पक्राउ गर्ने दुईजना प्रहरीलाई निलम्बन गरिएको छ । प्रहरी सहायक निरिक्षक (असई) उदयप्रसाद यादव र जवान मनोज शाहलाई निलम्बन गरिएको रौतहटका एसपी सिद्धिविक्रम शाहले रातोपाटीलाई बताए ।
पत्रकार महासंघ रौतहट शाखाका सह–सचिव सञ्जय सहनीले धीरज यादव र जितेशकुमार यादवलाई प्रयोग गरी मोजिबुल्लाह चढ्ने मोटरसाईकलमा लागुऔषध राख्न लगाएको प्रहरीको छानबिनबाट थाहा भएको छ । सह–सचिव सहनी फरार छन् ।
लागुऔषध राखेपछि सञ्जयले असई यादव र जवान मनोज शाहलाई बोलाएर पक्राउ गर्न लगाएको बताइएको छ । धीरज र जितेशविरुद्ध आपराधिक षड्यन्त्रसन्बन्धी कसुरमा कसुरमा प्रहरीले अदालतबाट म्याद लिएर अनुसन्धान शुरु गरेको छ ।
साउन ३२ मा साँझ ८ बजे रौतहटको गौर नगरपालिका–१ स्थित होटल ग्रिन सिग्नलबाट निस्केका ईशनाथ नगरपालिका–८ घर भएका मोजिबुल्लाह र राजपुर नपा–७ घर भएका शेख गुलाबलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।
मोजिबुल्लाहले पार्किङ गरेर राखेको बिआर–३० एस १८८५ नम्बरको भारतीय मोटरसाइकलमा १०५ ट्याब्लेट लागुऔषध नाइट्राभेट प्रहरीले ‘प्लटिङ’ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले गरेको छानबिनबाट पुष्टि भएको छ ।
तर, रौतहटका पत्रकारहरुले प्रहरीको छानविन फितलो भएको भन्दै प्रदेशस्तरको छानबिन समिति बनाएर घटनाको थप अनुसन्धान गर्न माग गरेका छन् ।
प्रहरी भन्छ–‘सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्छौ’
रौतहटमा सादा पोसाकमा खटिने प्रहरी (घुमुवा)ले लागु औषध राखेर पत्रकारलाई फसाएको आरोप लागेको छ । रौतहटबाट सञ्चालित ‘रौतहट एक्सप्रेस’का पत्रकार महम्मद मोजिबुल्लाहलाई प्रहरीले नै फसाएको पत्रकार महासंघ रौतहट शाखाले विज्ञप्ती निकालेर जानकारी दिएको छ ।
साउन ३२ मा साँझ ८ बजे रौतहटको गौर नगरपालिका–१ स्थित होटल ग्रीन सिग्नलबाट निस्केका ईशनाथ नगरपालिका–८ घर भएका मोजिबुल्लाह र राजपुर नपा–७ घर भएका शेख गुलाबलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । मोजिबुल्लाहले पार्किङ गरेर राखेको बिआर–३० एस १८८५ नम्बरको भारतीय मोटरसाइकलमा १०५ ट्याब्लेट लागुऔषध नाइट्रोभेट प्रहरीले ‘प्लटिङ’ गरेको पत्रकार महासंघले दाबी गरेको छ ।
असई उदय यादव नेतृत्वको टोलीले अरु दुईजना युवालाई प्रयोग गरेर सो लागु औषध मोटरसाइकलमा राख्न लगाएको फुटेजबाट देखिएको पत्रकार महासंघ रौतहटका सभापति प्रेमचन्द्र झाले रातोपाटीलाई बताए । पत्रकार महम्मद मोजिबुल्लाह र शेख गुलाब जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटको थुनामा छन् । सोमबारसम्म उनीहरुलाई रिहा नगरे कडा आन्दोलनमा उत्रने पत्रकार महासंघले चेतावनी दिएको छ ।
घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको बताउँदै जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका निमित्त प्रमुख (डिएसपी) नारायण चिमोरियाले दुई दिनमा सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्ने बताए । चिमोरियाले रातोपाटीसँग भने–‘अनुसन्धान भइरहेको छ, दुई दिनमा सत्यतथ्य बाहिर ल्याउँछौँ ।
पत्रपत्रिकाबाट सँग सम्बन्धित
खुला ठाउमै सम्भोग गरिरहेको देखेपछि घुम्न आएकाहरुले गरे रामधुलाई, को हुन् उनि ?
चीनद्वारा अन्तरिक्षमा हाइपरसोनिक क्षेप्यास्त्र परीक्षण, अमेरिकी खुफिया एजेन्सी हैरान
माधव नेपालले दिए आफ्नो सम्धीलाई यति ठूलो जिम्मेवारी, पार्टीमा खैलाबैला
कुलामानको अर्को चमत्कार, भारत र चीनमा समेत तरङ्ग
देउवाले बोलाए सर्वदलीय बैठक, एजेण्डा सुनेपछि प्रचण्ड बेहोस
डिस होमले २३ करोड रुपैयाँ बराबरको आइपीओ निष्कासन गर्दै, आबेदन मिति तोकियो
भारतीय सिमा नजिकै भिडन्त, भारतीय सेनाका ९ सहित् २२ को मृत्यु
ताइवानका लागि अमेरिका र चीनबिच युद्ध, चिनियाँ वायु सेना ताइवानको आकासमा
रामकुमारी झाँक्री फेरी भाइरल, श्रीमान् बने कारण
नर्भिक हस्पिटलबाट आयो मोहन वैद्यबारे दुखत: खबर, कार्यकर्ता निराश